अपडेट : अनलाइनखबरले हटाएको समाचार फेरि राख्यो, के-के फेरिए? – MySansar
अपडेट : अनलाइनखबरले हटाएको समाचार फेरि राख्यो, के-के फेरिए?
Posted on September 17, 2020 September 18, 2020 by Salokya
अनलाइनखबरले आज असोज १ गते बिहान ९ बजेर ३३ मिनेटमा पोस्ट गरेको ‘डीएभी स्कूलले लकडाउनको शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्ने’ शीर्षकको समाचार हटाएको थियो। यसबारे मैले ब्लग लेखेको थिएँ ‘अनलाइनखबर’ले किन सुटुक्क डिलिट गर्‍यो यो समाचार? यस्तो थियो समाचार शीर्षकमा।
ब्लग लेख्दा त्यो समाचार खुलेको थिएन। बरु ‘रिडाइरेक्ट’ भएर अनलाइनखबरको ‘होमपेज’मा पुग्ने बनाइएको थियो। हेर्नुस् बिहीबार नेपाली समय अनुसार साँझ (11:08:29 UTC) मा क्लिक गर्दा खुलेको पेजको अर्काइभ।
तर आजै राति अबेर त्यो लिङ्कमा पुनः पेज खुल्ने बन्यो। तर त्यसमा रहेको समाचारको शीर्षक र सामग्री भने फरक भइसकेको थियो।
हाम्रोपात्रोमा भएको पुरानो समाचार शीर्षक।
अनलाइनखबरले सुटुक्क हटाएको समाचारमा के थियो? यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्
अहिले भने कस्तो देखिन्छ? यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। (बिहीबार राति सवा ११ बजे लिइएको स्न्यापसट अर्काइभ)
पहिलेको र अहिलेको समाचारमा के फरक ?
पहिलेको शीर्षक- डीएभी स्कूलले लकडाउनको शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्ने
अहिलेको शीर्षक- सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दा अभिभावक अन्योलमा, धमाधम शुल्क उठाउँदै निजी विद्यालय
पहिलेको लिडलाइन : ललितपुरको धोबीघाटस्थित डीएभी सुशील केडिया विश्व भारतीय स्कूलले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पढाउँदै नपढाएको बेलाको पनि शुल्क तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
अहिलेको लिडलाइन : ललितपुरको धोबीघाटस्थित डीएभी स्कूल, जावलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुल, नक्साल–विशालनगरस्थित मल्पी सिटी स्कूल, हात्तीगौंडास्थित इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुल लगायतले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पढाउँदै नपढाएको बेलाको पनि शुल्क तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
फरक : पहिले एउटा मात्र स्कूलको नाम थियो, अहिले चार वटा स्कूलको नाम राखेर ‘लगायत’ थपिएको छ। पहिलेकोमा नामै गलत थियो- डीएभी सुशील केडिया विश्व भारतीय स्कूल। खासमा हुनुपर्ने भारती स्कूल थियो।
अनलाइनखबरले समाचार डिलिट नगरेर फेरि राख्नु राम्रो काम हो। नेपालको अग्रणी अनलाइन भएका कारण उसको यस्तो अभ्यासले अनलाइन पत्रकारिताकै गरिमा बढ्छ।
तर यसरी समाचारको शीर्षक र कन्टेन्ट परिवर्तन गर्दा एउटा सानो सूचना पनि कतै राखिदिएको भए अझ राम्रो अभ्यास हुने थियो कि !
अनलाइनखबरको सही अभ्यासका लागि मेरो तर्फबाट ताली !
2 thoughts on “अपडेट : अनलाइनखबरले हटाएको समाचार फेरि राख्यो, के-के फेरिए?”
Old original News
New changed content
Pingback: ‘अनलाइनखबर’ले किन सुटुक्क डिलिट गर्‍यो यो समाचार? यस्तो थियो समाचार « Mysansar